Berhanu Hundee Kutaa tokkoffaa Seensaaf akka ta’u fi boodarra waan tokko tokko ibsuuf akka yaadatamu, mee xinnoo ka’umsa dhimma kanaa haa laallu. …
JUXTAPOSING DEMOCRACY WITH THE GADA SYSTEM OF THE OROMO PEOPLE Part I By Odaa Hora The amorphousness of the term democracy utilized as …
– Qormaatota kaleessaa, kan har’aa fi kan boruu – Berhanu Hundee Kutaa Diigdamiiafraffaa Dubbistootni fi hordoftootni barruulee kiyyaa tokko tokko gaafiilee adda addaa …
Jarana Oromoon gidiraa fokkisaa keessa turuun dhugaa dha. Gidiraa obbaafatuuf gatii kanfalee qabsaaye. Amma qabsoon isaa karaa qabateera. Dhugaa kana abbaa fedhetu arga. Tokkummaan Oromoo …
– Qormaatota kaleessaa, kan har’aa fi kan boruu – Berhanu Hundee Kutaa Diigdamiisadaffaa Dhimma har’a kaasuu barbaade keessa osoo hin seenin dura, hiriira …